दलान नेपाल : लालू अब जेल तिर
लालू अब जेल तिर
at 9:32 PM Posted by Dalan
भारतको राष्ट्रिय राजनितीका सबै भन्दा चर्चीत अनुहारहरु मध्ये एक हुन राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालूप्रसाद यादव ।
उनी र उनकी पत्नी राबडी देवी १५ साल सम्म बिहारमा राज गरेका थिए । पछि उनी केन्द्रिय रेलमन्त्री भएर केन्द्रिय राजनितीमा चर्चाका पात्र बने । बिहारको एउटा गरिब परिवारमा जन्मेका लालू प्रसाद यादव सत्ताको राजमा पुग्न लामो सफर गरेको देखिन्छ ।
समाजवादी नेता जयप्रकाश नारायण्वाट प्रभावित भएर विद्यार्थी राजनितीमा होमिएका लालू २९ बर्षकै उमेरमा पहिलो पटक संसद बनेका थिए । जनता पार्टीवाट पहिलो पटक संसल बनेका लालू
त्यतीवेला भारतका युवा संसदका रुपमा प्रख्यात थिए ।
त्यसपछिको १० बर्ष उनी बिहार राजनितीको साचो बन्न पुगे जाहा उनले यादव र मुस्लिम मतदाताहरु माझ लोकप्रीय थिए ।
बिहारमा मुस्लिम मतदााहरु पारम्परिक अनुसार कागे्रसलाई भोट दिने गरेका थिए । तर १९८९ मा भएको भागलपुर दंगापछि ठुलो संख्यामा रहेका मुस्लिमहरु लालूलाई समर्थन गर्न लागे ।
कतिपय विश्लेषहरुले लालू त्यही मुस्लिम र यादव गठजोडका कारण बिहारमा राज्य गरेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्ने गर्छन । सन १९८९ मा भको आम चुनाव र बिहार विद्यानसभाको चुनावमा लालूले राज्य र राष्ट्रिय मोर्चा दुवैमा सफल नेतृत्व दिएका थिए । जसपछि सन १९९० मा उनी बिहारमा मुख्यमन्त्री बन्न पुगे ।
सन १९९७ मा जनता दल विभाजन भएपछि लालूले राष्ट्रिय जनता दल नाम आफनो अलगै पार्टी स्थापना गरे । सन २००५ को विद्यँनसभा चुनावमा हार्ने वेला सम्म यी पाटीृले विहारमा सरकार चलाउदै थिए । यसबिचमा लालू केन्द्रिय राजनितीमा सक्रिय भईसकेका थिए र युपिएको पहिलो सरकारमा उनी रेलमन्त्री बन्न पुगे । हुनकी यस विचमा बिहारमा आरजेडी कमजोर बन्दै गएका थिए र मुख्यमन्त्री नितिशकुमार र उनको पार्टी जेडियू मजबुत बन्दै गए ।
सन २००९ को विद्यँनसभा चुनावमा लालूको पार्टीले ठुलो क्षती व्योहोर्नु पर्यो । र युपीए गठबन्धनमा आरजेडीको महत्व घटन गयो । तरपनि लोकसभामा उनको पाटीृको ४ जना संसद थिए जबकी राज्यसभामा जम्मा २ जना ।
आउदो निर्वाचनमा लालूले आफनो गुमेको साख फर्काउने तयारीमा जोडतोडका साथ भिरेका थिए तर यसैविचमा उनी ‘चारा घोटाला’ मा भ्रष्टाचारी ठहर हुदै अब जेल तिर लाग्नु पर्ने हुन्छ ।
RAHEL COHRAN May 24, 2016 at 11:47 AM
म श्री Rahel छु जीवन समय दिने निजी ऋण ऋणदाता
व्यक्तिहरूलाई मौका ऋण, व्यापार कम्पनीहरु, बीमा, आदि हुनुहुन्छ
कुनै पनि वित्तीय कठिनाई वा ऋण खाँचो तपाईं लगानी वा तपाईंलाई
बनाउन कुनै थप हामी यहाँ रूपमा भुक्तानी गर्न तपाईंको बिल खोज ऋण आवश्यक
आफ्नो सबै वित्तीय समस्या विगतका कुरा। हामी सबै प्रकारका प्रस्ताव
अग्रिमसँग शुल्क बिना 2% को दर संग कुनै पनि मुद्रा मूल्यवर्ग मा ऋण।
म तपाईं हामी गर्न तयार छन् भनेर थाहा यो ठूलो मध्यम प्रयोग गर्न चाहनुहुन्छ
आफ्नो आर्थिक समस्या भनेर समाधान गर्न ऋण कुनै पनि प्रकारको तपाईंलाई सहयोग।
हो त E-rahelcohranloan@gmail.com मार्फत अहिले फिर्ता प्राप्त गर्नुभयो भने
थप विवरण लागि, तपाईं अत्यधिक स्वागत ...
Absolon Casimir June 10, 2016 at 4:19 AM
Unknown August 5, 2016 at 1:45 PM
JULIEN GARCIA October 2, 2016 at 10:32 AM
JP Morgan March 13, 2017 at 3:10 AM
एक ऋण आवश्यक छ? तपाईं एक ऋण को लागि देख गरिएको छ? तपाईं ऋण कुनै किसिमको प्राप्त गर्न प्रयास गरिएको छ? तपाईं एक किफायती ऋण प्राप्त गर्न चाहनुहुन्छ भने MOHS LOAN कम्पनी एन्ड्रयू अब लागू हुन्छ। ऋण 3% को एक धेरै कम ब्याज दर मा पेशकश छ। अब हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस् यदि तपाईं इमेल मार्फत रुचि छन्: andrewmohsfirm@gmail.com +2349061800717